🥇 ▷ Qaabdhismeedyada 'AFIP' ee qodis iyo qiima dhimis loogu talagalay howl wadeennada ganacsiga shisheeye ✅
Qaabdhismeedyada ‘AFIP’ ee qodis iyo qiima dhimis loogu talagalay howl wadeennada ganacsiga shisheeye
Tirtirista codsiyada adeegyada aan caadiga ahayn waxaa lagu sameyn karaa oo keliya shaqsi ahaan, iyadoo xaddidan weyn ee maalmaha iyo waqtiyada
Hawlwadeennada ganacsiga shisheeye way tirtiri karaan codsiyada adeegyada aan caadiga ahayn ee qotodheer, iyadoo qiimaha hoos udhaca ah uu jiro, Maamulka Maamulka Dakhliga Dadweynaha ee (AFIP) ayaa wariyey.
“Nidaamku wuxuu u ahaa mid loo sameeyay milkiileyaasha ganacsiga shisheeye si loo baajiyo codsiyada adeegyada aan caadiga ahayn”, tanina “kansalku ma yeelan doono kharash haddii la sameeyo illaa 12 saacadood ka hor bilowga qorshaynta hawlgalka”, AFIP ayaa war qoraal ah ku sheegtay.
Illaa iyo hadda, baajinta codsiyada adeegyada aan caadiga ahayn “waxaa keliya oo lagu qaban karaa qof ahaan, iyada oo xaddidan weyn oo maalmo iyo waqtiyo ah,” ayay hay’addu sharraxday.
Iyada oo la dhaqan galayo RG 4507/19, oo wax ka beddalaya qaraarka guud ee 665/99, adeegsadayaasha u baahan in la kansali karo adeegga waa inay la galaan koodh amni oo heerka amniga 3, ama ka sareeya, Nidaamka Maareynta Adeegyada Aan caadi ahayn (SASE) iyadoo loo marayo websaydhka ‘AFIP’.
Hawl wadeennada ma sii lahaan doonaan kharashyo haddii ay joojiyaan adeegga marka 12 saacadood ama in kabadan ay ka maqnaadaan bilowga hawlgalka; hore, haddii ay ka tanaasulaan codsiga, waxay ku bixiyeen ugu yaraan laba saacadood adeegyada wakiila kasta ee kastam.
“Qiimeynta waxaa loo hayaa codsiyadaas oo la baajiyay muddo 12 saacadood gudahood ah ilaa bilowga hawlgalka,” ayuu yiri AFIP.
Adeegyada aan caadiga ahayn waxay la xiriiraan howlaha kormeerka ee ay bixiyaan shaqaalaha Agaasinka Guud ee Kastamyada (DGA) maalmaha aan shaqeyn ama saacadaha, ee ay codsadaan hawlwadeenada ganacsiga shisheeye.
Hawlahan waxaa lagu canshuuray Sicirka Adeegyada aan caadiga ahayn.